December 28, 2020 - Khitalin Media
December 28, 2020 by Khitalin Media
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်လေး အရက်သောက်တာလား??? ရတယ် … သောက်ယောက်ျားလေးပဲ … ငါနားလည်တယ်ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်ရက်ဆက်တော့ မဖြစ်စေနဲ့ငါလက်တွဲမယ့်သူ ကျမ္မာရေးကောင်းဖို့အတွက်နင် … နားပူတယ်ပြောနေလည်းငါကတော့တားရမှာပဲ Facebook သုံးတာလား??? ရတယ် … သုံးလေလူငယ်ပဲ … ငါနားလည်တယ်ဒါပေမယ့်ဆော်တွေနဲ့Cb မှာတော့ မကြူနဲ့ငါလက်တွဲမယ့်သူ အရှုပ်အရှင်းကင်းဖို့နင် … နားပူတယ်ပြောနေလည်းငါကတော့ တားရမှာပဲ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးထားတာလား??? ရတယ် … ထားလေလူမှုရေးပဲ … ငါနားလည်တယ်ဒါပေမယ့်ဖင်ကုတ်ခေါင်းပုတ်တော့မခင်နဲ့ငါလက်တွဲမယ့်သူကို လူရှုပ်လူပွေလို့အပြောမခံရဖို့နင် … နားပူတယ်ပြောနေလည်းငါကတော့တားရမှာပဲ အပျော်အပါးမက်တာလား??? ရတယ် … မက်ပေါ့ဒါပေမယ့်ရှေ့ရေးအတွက်တော့စဉ်းစားငါလက်တွဲမယ့်သူအရည်အချင်းပြည့်ဝဖို့အတွက်နင် … နားပူတယ်ပြောနေလည်းငါကတော့တားရမှာပဲ တကယ်လို့များ …နင်ယူမယ့်သူ … ငါမဟုတ်ခဲ့ရင်တောင်ငါနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ … နင့်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်စေချင်တယ် တစ်ချိန်မှာ …နင်ယူမယ့်သူအထင်မသေးစေဖို့နင်ဂုဏ်ယူနိုင်ဖို့အဲဒါ …… ငါ့အချစ်သက်သေပဲ #CrdtoOriginalWriter Unicode မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ခံယူခကျြလေး … Read more
ဘက်စ်ကားဂိတ်မှာ အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ကြည်နူးစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု
တစ်ရက် ဘက်စ်ကားဂိတ်မှာ ကားစီးဖို့သွားရင်း နဲ့ ကားဂိတ်ရောက်တော့ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးစုံတွဲကိုတွေ့တယ် ကားထိုင်စောင့်နေတယ်ထင်တယ် ကားဂိတ်မှာ လူကလည်းရှင်းနေတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်… လိုက်ဖက်ပါတယ် ရုပ်သန့်သန့်လေးတွေပဲ… ကားစောင့်တဲ့ခုံမှာ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ကိုင်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့စောင့်နေတဲ့ ညနေခင်း မြင်ကွင်းလေးက ကြည်နူးစရာ… ခနနေတော့ ကောင်မလေးကပြောတာကြားလိုက်တယ် ကို ရေဆာတယ် ရေဗူးသွားဝယ်ပေးပါလားတဲ့… ကောင်လေးက ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ခနစောင့်ဆိုပြီး တစ်ဖက်ကားလမ်းကူးသွားတဲ့အချိန်မှ ကောင်မလေးက ကောင်လေး လွယ်အိတ်ကိုအမြန်ဖွင့် ဟိုရှာဒီရှာလုပ်ရော… ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ငတိတော့သေပြီ ကောင်မလေးက သူလစ်တုန်း ဘာတွေရှုပ်ထားလည်း ရှာခံရတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတွေးနေတုန်းရှိသေး ကောင်လေးပိုက်ဆံအိတ်ကိုဖွင့်တာတွေ့လိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ဆီကငါးထောင်တန်လေး တစ်ရွက်ကို အမြန်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး လွယ်အိတ်ထဲ ပိုက်ဆံအိတ်ပြန်ထည့်ပြီး အိတ်ကိုပိတ် ဒီတိုင်း ဘာမှမဖြစ်သလိုပြန်နေလိုက်ရော… သူအိတ်ပြန်ထားပြီး မကြာပါဘူး ကောင်လေးပြန်ရောက်လာတယ်… ရေဗူးလေးကိုင်ပြီး ကောင်မလေးက ဟန်ပြရေသောက်တာတော့ … Read more
အမြိုးသား တှေ တနျဖိုးအထားဆုံး ကိုယျ့ခဈြသူကောငျမလေးရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးဟာ ဘာတှဖွေဈမလဲ
မိန်းကလေး တော်တော်များများဟာ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်အလှထက် အတုတွေတပ်၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အရာတွေကိုမှ ပိုပြည့်စုံလှပသွားတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ကတော့ ပြုပြင်ထားတဲ့ အလှထက် ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှကိုသာ ပိုမြတ်နိုးတတ်ကြတာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က ဆံပင်တပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတုန်း၊ Big Eyeတွေတပ်ဖို့ လုပ်နေတုန်း ကိုယ့်ချစ်သူကောင်လေးက …. အဲ့ဒါတွေတပ်မထားလည်း ချစ်က လှပြီးသားဆိုပြီး ပြောတာကြားဖူး ကြမှာပါ။ ဒါတွေကို မလုပ်ဖို့၊ မဆင်မြန်းဖို့ သူတို့တားလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ချစ်သူ ကောင်မလေး စိတ်ခုသွားမှာစိုးလို့သာ သူတို့မတားကြတာပါ။ အမှန်တော့ အဲ့ဒီအတုအယောင်တွေကို သူတို့ မလိုလားကြပါဘူး။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့ စိတ်ရှုပ်ကြရတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပါနဲ့။ ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်တာမျိုးဆို ပိုလို့တောင် ဆိုးပါသေးတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို သူတို့တန်ဖိုးထားကြသလဲဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်ကြည့်လိုက်တော့…. ၁။သင့်ဆံပင် အမျိုးသားတွေဟာ … Read more
ဘုန်းကြီးကားနားမှာ ကလေးတွေတွေ့လို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ
အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကို ဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့ သွားလိုက်သောအခါ အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အင်္ကျီလေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေ ခုလိုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ရွာလေးမှာရှိတဲ့ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်းလေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးပါနိုင်ပါလားလို့စဉ်းစားမိရင်း။ Kyaw Win Tun Unicode အလှူ ညတရားပှဲမှာ ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ တှလေို့ ကားကို ဆော့နကွေတယျအထငျနဲ့ သတိပေးဖို့ သှားလိုကျသောအခါ အလှူမှာ ညတရားပှဲ ဓါတျပုံရိုကျရငျး မဏ်ဍပျရှထှေ့ကျထိုငျနမေိခြိနျလေး ကလေးလေးတှေ ဘုနျးကွီးကားနားမှာ … Read more
ဒီလိုအချက် (၆)ချက်ရှိတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ပါ
ဒီအချက်တွေရှိတဲ့ ကောင်လေးမျိုးကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးချယ်ပါ မိန်းကလေး တစ်ချို့ဟာ ချစ်သူရွေးမယ်ဆိုရင် အသားဖြူရမယ်၊အရပ်ရှည် ရမယ်၊ရုပ်ချောရမယ်…စသဖြင့် အချက်တွေကိုစံထားပြီး ရွေးတတ်ကြ ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကို ချစ်သူတော်မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ကြည့်ရမ လဲ.၊ ဘာတွေကို စံထားပြီး ချစ်သူအဖြစ် သတ်မှတ်သင့်၊မသင့်ကို ဆုံးဖြတ် ရမလဲဆိုပြီး ခေါင်းစားနေတဲ့ ညီမငယ်လေးတွေအတွက် အကြံပြုပေးပါရစေ.. (၁)ကြင်နာတတ်တဲ့ လူမျိုး ဒါကတော့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ကြင်နာတတ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလို့သာ သတ်မှတ် လက်ခံထားသူတွေရှိပြီး ယောက်ျားဆိုရင်တော့ ရဲရင့်၊ပြတ်သားရမယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ပဲ တွဲမြင်ပါ တယ်။ တကယ်တော့ ကြင်နာတတ်ခြင်းက လူသားအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါ တယ်။ ကြင်နာ သနားတ တ်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတဲ့ ယောက်ျားမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆို ရင် လုံးဝလက် လွတ်မခံ သင့်ပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးက သင့်ကို ဘယ်တော့မှ ထိခိုက်ပျက်စီးအောင် … Read more
လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ဖို့ အချိန် စက္ကန့်ပိုင်းပဲ လိုပါတယ်တဲ့။ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် မသိဘဲနဲ့လည်း ချစ်မိတတ်ကြတာ ဒါကြောင့်ပါပဲ။ အချစ်ကို စတင်တွေ့ရှိတဲ့ အချိန်တွေ အများစုကတော့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြုအမူတစ်ခုခုကို ကောင်လေးတွေ မြင်လိုက်ရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ ကောင်မလေးတွေ ပြုလုပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ကောင်လေးတွေက ကြွေသွားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အပြုအမူတွေကို ကောင်လေးတွေက ကြွေတတ်လဲ ဆိုရင်တော့.. စိတ်ဆိုးနေတာ ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် မဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ အလိုမကျတဲ့ မျက်နှာအနေအထားက ကောင်လေး အများစုအတွက် သဘောကျစရာ ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို မျက်နှာပေးလေးနဲ့ ဆောင့်အောင် ပြုမူနေတာမျိုးကို မြင်မိပြီးလည်း ကောင်လေးတွေက ကြွေသွားတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးဆန်တာ ကလေးဆန်တဲ့ အပြုအမူရှိတဲ့ … Read more
ဖူးစာဖက်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် တူညီနေမယ့်အချက်များ
ဖူးစာဖက်စစ်မှန်တယ်ဆိုရင် သေချာပေါက် တူညီနေမယ့်အချက်များ ဖူးစာဆိုတာ ဗွေမပါပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သင့် ဖူးစာဖက်မှာဆိုရင်တော့ သူ့မှာ ရှိကိုရှိနေမယ့် အချက်တွေ ရှိနေမှာပါ။ အသွင်တူမှ အိမ်သူ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အလကားပြောခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဖူးစာဖက်ဆိုတာမျိုးက သင့်ရဲ့ နောက်ကိုယ်ပွားတစ်ခုပဲ ဖြစ်လို့ သင်ရဲ့ မသိစိတ်ကနေ သိနိုင်သလို ဒီအချက်တွေကနေလည်း သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) သင်နဲ့ အမူအကျင့်တူတယ် လူတူမရှား နာမည်တူမရှားဆိုပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမူအကျင့်တွေ တူတာကတော့ မောင်နှမ မဟုတ်ရင် အတော့်ကို ရှားပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို မောင်နှမအချင်းချင်းတောင် အမူအကျင့်မတူကြပါဘူး။ သင်က အသန့်ကြိုက်တတ်တယ်။ သန့်ရှင်းမှုကို သတိထားကြည့်မိတတ်တဲ့သူ ဖြစ်မယ်ဆို သူကလည်း အဲ့အကျင့် ရှိနေတာမျိုး၊ ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်ကို ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဆောင်ထားတတ်တာမျိုးဆို သူလည်း အဲ့လိုမျိုး တူနေတာမျိုး၊ … Read more
အိမ်မှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိရင် ဒီနမိတ်တွေ သိထားပါ
အိမ်မှာကြောင်တစ်ကောင်ရှိရင် ဒီနမိတ်တွေ သိထားပါ ကြောင်နိမိတ် ၁။ အပျိုတွေ ကြောင်မြီး တက်နင်းမိရင် ကျိန်ဆဲခံရလို့ အဲ့နှစ် လင် မရပါဘူး။ (ရှပ်ပြာ ရှပ်ပြာ သွားတတ်သူများ တစ်နှစ်တစ်ခါနင်းရင်း ဟိုင်း သွားတတ်ပါတယ်။) ၂။ အိမ်မှာ ကြောင်မဲမွေးရင် အဲ့အိမ်က အပျိုတွေ ချစ် ကံခေတတ်ပါတယ်။ ၃။ အိမ်ကအထွက် နောက်က ကြောင်လိုက်လာရင် ငွေရှာခိုင်းတာပါ။ အဲ့လူ ငွေရလာတတ်ပါတယ်။ ၄။ ကြောင်တွေ ခြံရှေ့ အိမ်ရှေ့ ငုတ်တုတ်ထွက်ထိုင်‌နေရင် ငွေလာပေးမယ့်သူ မျှော်တာပါ။ ၅။ အိမ် ဆောက်နေကတည်းက ခြံထဲ ကြောင်ထည့်မွေးပါ။ အဲ့အိမ် တော်ရုံ ကြွက်မလာပါဘူး။ ၆။ အိမ်မှာ ကြောင်နက်ရှိရင် မျက်စေ့စွန်တဲ့အခါ သူ့အမြီးနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ နုရင် ပြန်ပျောက်ပါတယ်။ … Read more
ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ချင်ရင် ဒီအချက် (၁၀)ချက်ကို လိုက်နာပါ Relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ရာမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့ တူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေပဲ ပါဝင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အစပိုင်းမှာတော့ အဲဒီ့ (၂) ချက်ကြောင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်တည်လာတဲ့ အချစ်ကို ရေရှည်တည်မြဲစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားလိုက် နာစရာတွေ များလာပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အသေးအဖွဲ နားလည်မှု လွဲတာလေးတွေကအစ လမ်းခွဲပြတ်စဲတာတွေ အထိ ဖြစ်လာနိုင်စေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်တွဲမြဲချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ (၁၀) ချက်ကို လိုက်ညှိပြီး လုပ်ကြည့်နော်။ (၁) လက်ခံပါ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင့်ချစ်သူကိုလည်း တွဲလာရင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ ပြစ်ချက်တွေ တွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် … Read more
သာယာနေတဲ့ ချစ်သူ ဘဝ လေးက ဒီအမှား (၄) ခုကြောင့် ပျက်ဆီး သွားနိုင်ပါတယ် တစ်ချို့ သော စုံတွဲ တွေဟာ နှစ်ယောက် အတူရှိနေရင် ယခင်ကထက် ပိုမို အောင်မြင်ကြပြီး ပျော်ရွှင်ကြရလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာ ပြဿနာ ကို မဆို အတူလက်တွဲဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာ တွေကြုံတဲ့အခါမှာ သင်ရော ၊ သင့် ချစ်သူ ကောင်လေး ပါ အတူတူ မဖြေရှင်းနိုင်ကြဘူးဆိုတာ သင်တို့ နှစ်ယောက် တစ်သားတည်း ကျမနေသေးလို့ပါ။ သင်တို့ နှစ်ယောက် ဘာကြောင့် တစ်သားတည်း မကျသေးတာလဲ ဆိုတာကို မီးမောင်း ထိုးပြနေတဲ့ အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ သူဟာ သင့်ကို အပြည့်အ၀ မယုံကြည် ဘူးဆိုရင်။ ယုံကြည်မှု … Read more